၏ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ် မှစ. ကိုယ်ဝန်, ထိုမိနျးမကနျြးမာရေးကိုသူတို့ပြည်နယ်အတွက်အပြောင်းအလဲများအဖြစ်အချို့သောရောဂါစောငျ့ရှောကျနိုငျသညျ။ ကိုယ်ဝန်အတွက်အကြီးအကျယ်ခေါင်းကိုက်ဆန်းမဟုတ်ပါ။ မျှော်လင့်မိခင်ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာတစ်ခုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကကူညီဖို့ဘယ်လိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာမနှစ်မြို့ဖွယ်ရောဂါလက္ခဏာတွေ၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာအထဲကရှာတွေ့ဖို့လည်းအသုံးဝင်သည်။
သာသူသည်နာကျင်မှုအတိအကျအကြောင်းမရှိတည်ထောင်ရန်နှင့်ကိုယ်ဝန်မကောင်းတဲ့ခေါင်းကိုက်နေစဉ်အတွင်းအဘယ်ကြောင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြေဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာဆရာဝန်မှခရီးစဉ်ရွှေ့ဆိုင်းဖို့မ သာ. ကောင်း၏။
နေမကောင်းကျန်းမာရေးများ၏အကြောင်းရင်းတစ်ဦးခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီရောဂါချို့ယွင်းသွေးကြောသေံခြင်းဖြင့်အစပျိုးသည်။ ဒါ့အပြင်နာကျင်မှုကိုအမျိုးသမီး၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအပြောင်းအလဲများနှင့်ပြန်စီစဉ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားအကြောင်းပြချက်များပါဝင်သည်:
စိတ်ဖိစီးမှု, အိပ်ပျော်ခြင်းမရှိခြင်း, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်;
အစောပိုင်းကိုယ်ဝန်အတွက်အကြီးအကျယ်ခေါင်းကိုက်မကြာခဏအဆိပ်၏အဖော်ဖြစ်ပြီး, နောက်ပိုင်းတွင် preeclampsia ဖြင့်လိုက်ပါသွားနိုင်ပါသည်။
လေးနက်သောရောဂါများတစ်ဦးကအရေအတွက်အားလည်း, ဥပမာ, နှောက်အမြှေးရောင်, ရေတိမ်စူးရှသောလေဖြတ်ထိုကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်ပြလိမ့်မည်။ အထက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၏ရောဂါများလည်းဒီလက္ခဏာအားဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်အကြောင်းကိုငါသိ၏နှင့်နှလုံးပုံမမှန်ဖို့ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ တိကျရောဂါဆရာဝန်စစ်တမ်းကိုကိုးကားစခွေငျးငှါကြောင့်ဖြစ်သည်။
မဆိုမျှော်မိခင်တစ်ဖန်ဆေးယူချင်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တစ်ဦးပေးရဆေးကိုလက်ခံရရှိအားလုံးကိုအကြံပြုချက်များ။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အမျိုးသမီးများကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်ကအောက်ပါနည်းလမ်းများကွိုးစားနိုင်သည်
သငျသညျတခု decoction သောက်ရနိုင်ပါတယ် နှင်းဆီတင်ပါး;
နာကျင်မှုခံစားခဲ့ရရာအရပ်၌ဖို့, တကအအေး compress လျှောက်ထားရန်ဖြစ်နိုင်;
အစားအသောက်များတွင် Citrus အသီးအပွ, အခွံမာသီး, ချောကလက်, ချဉ်နှင့်သောက်သည်အစားအစာထဲမှာကန့်သတ်ထားရပါမည်။
"Efferalgan" "Panadol" ခွင့်ပြုဆေးဝါးများကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်လိုက်တဲ့အခါပြင်းထန်တဲ့ခေါင်းကိုက်ခြင်း။ သို့သော်နိုင်ပါတယ်သာဆရာဝန်၏အမိန့်အပေါ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုသင်ယူပါ။
ကိုယ်ဝန် 19 ပတ်ကြာ - ဘာဖြစ်သွားမလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက်ဗိုင်းရပ်စ် - 1 သက်တမ်း
သန္ဓေသား hypoxia - ကုသမှု
ကိုယ်ဝန်အတွက်ဆစ်ဖလစ် - ဘာမိခင်နှင့်ကလေးခြိမ်းခြောက်?
ရုံးမှာသူ၏ပထမဦးဆုံးသောနေ့၌ 18 ခွေး
လေ့ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျ - ဖြစ်စေမစိတ်ပျက်လက်ပျက်သလော
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငှားရမ်းခြင်းမှထိန်းညှိဖို့ရှိခဲ့ရာ 14 လူကြိုက်များရုပ်ရှင်,
အဘယ်အရာကို 2014 ခုနှစ်နွေရာသီအတွက်ဖက်ရှင်ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
မည်သို့လျင်မြန်စွာခြောက်သွေ့တဲ့လက်သည်း polish သလော